Howlgallo Ammaanka lagu xaqiijinayo oo laga sameeyay Hiiraan – Radio Muqdisho
Howlgallo Ammaanka lagu xaqiijinayo oo laga sameeyay Hiiraan
Howllgalo lagu xaqiijinaya Ammaanka ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan, iyadoo saraakiisha Howlgalladaasi Hogaaminayay ay ka warbixiyeen halka ay wax marayaan.
Labo xidigle Maxamed Muumin Cilmi ayaa sheegay in Howlgalladaas Ammaanka lagu Adkeeynayay ciidanka Dowladda ay ka sameeyeen Deegaanno ka tirsan Gobolka Hiiraan gaar ahaa degmada maxaas ee Gobolkaas.
“wali waxaan waddnaa Howlgalladii adkaynta ammaanka kaasoo ay sameynayaa ciidammadda xoogga dalka iyo Kuwa AMISOM hadda aan kula hadlaayo ciidanku waxa ay joogaan tuulo la yiraahdo Wabxo oo kala barta galgaduud iyo hiiraan qorshahana waa inaan Bacsannaa kooxda Alshabaab” ayuu yiri Labo Xidigle Maxamed Muumin.
Dhanka kale Labo xidigle Maxamed Muumin ayaa sheegay in Ciidanka Dowladda oo kaashanaaya kuwa AMISIOM ay sii wadi doonaa Howlgallada lagu baacsanayo kooxda Alshabaab isla markaana ciidanku ay isku diyaarinayaan in ay kooxda Alshabaab ka saaraan deegaannada ay uga sugan yihiin Soodinta kala qaybisa Gobollada Galgaduud iyo Hiiraan.
NUSOJ oo cambaareysay Xarrigga labo Weriye oo Maamulka Gobolka Shabeelada Dhexe Xabsiga Dhigeen, kuna baaqday in xorriyadooda loo soo celiyo.